दलितभित्र काे दलित - मिम बहादुर परियार - विभेद बिरुद्ध अभियान
दलितभित्र काे दलित - मिम बहादुर परियार
Hamro Sanchar 8:29 AM लेखहरु ,0Comments
विभेद बिरुद्ध अभियान - भदौ ५ , नेपाली समाजमा गाडिएको कुप्रथा हाे छुवाछूत ,त्यसमाथि दलितले दलितलाई गरिने विभेद र छुवाछूतका घटनाको अवस्था एकदम काहालि लाग्दाे छ । सुन्दा, पढ्दा अलि नमिठाे लाग्छ तर म लेख्न बाध्य छु । हामी समानताका कुरा गर्छाैं , दलित हकअधिकारका विषय संवाद गर्छाैं , विभेदकारी समाजिक मुद्दामा वकालत गर्छाैं , दलित एकताका कुरा गर्छाैं । तर दलितभित्र हुने विभेदका विषयमा किन बाेल्दैनाै ?
विभिन्न दिवसमा अायाेजना गरिने कार्यक्रम , र्याली , जुलुसका नारामा दलित समुदायमाथि हुने समाजिक विभेदका विरुद्ध सबै दलित भनिएकाहरुले हाे मा हाे मिलाएर अावज उठाएका हुन्छन् । दलितका विभिन्न संघ, संस्था छन् , सबैका अा-अाफ्ना उदेश्य तथा कार्यक्रम छन् । दातृ निकायले अर्बौं रुपैयाँ जनचेतना , अनुसन्धान , समाजिक विकासका र रुपान्तरणका लागि दलित समुदायलाई प्रदान गरेका छन् । बाहिरी अावरण हेर्दा काेहि भन्दा काेहि कम देखिदैन दलित संघसंस्था र प्रतिनिधि । सबैको साझा उदेश्य भनेकै दलितमाथि हुने विभेद विरुद्ध , छुवाछूत विरुद्ध लड्ने ,अावज उठाउने हाे । बाेल्दा सबै चर्को स्वरमा भाषण दिन्छन् तर दलितभित्र हुने विभेदका विषयमा किन माैन ? दलितबिच हुने विभेदका घटनाले बेलाबेलामा मिडिया तताउने काम नगरेको हाेइन पनि । एक दलितले अर्को दलितमाथि पानी छाेइएकाे निउँमा कुटपिट , कामी र दमाई युवायुवतीले विवाह गर्दा कामी परिवारबाट बहिस्कारका घटना नयाँ हाेइन् । दमाईले उनीहरु भन्दा तल्लो जात मानिएका बादि तथा गन्दर्भलाई गर्ने विभेद पनि नयाँ हाेइन । तराईका दलित समुदायमा पनि त्यस्तै बिकराल स्थिति छ । नेवार दलितबिच पनि विभेदकाे फाटो छ । दलित दलितबिच तिमीहरूभन्दा म माथिल्लो जातको मान्छे हुँ भन्ने कुविचार र कुभावना छ । दलितभित्र हुने यस्ता गतिविधिले दलित एकतामा कत्तिको टेवा पुर्‍याउन सक्ला ? टुटेका, सुकेको दलित अावजकति बुलन्द हाेला ? यहीँ र यस्तै परिपाटीले दलित अान्दोलन कुन दिशातिर जाला ?
निश्चितरूपमा यस्ता छाडा गतिविधिले दिशा विगार्ने, अान्दोलनकाे मर्म भावना चिर्ने, विभाजन ल्याउने बाहेक अरु काम गर्नै सक्दैन । गाउँ गाउँमा अझै पनि एक दलितले (कामी) अर्को दलित (दमाई ) लाई गर्ने व्यवहार कुनै ब्रह्माणले गर्ने विभेद भन्दा कम हुदैन । उनीहरू बिच पानी नचल्ने , भाेज भतेरमा छुट्टै भान्साकाे ब्यवस्था गर्ने , राेटि र बेटिकाे सम्बन्ध साेच्न नसकिने अवस्था रहेको छ । अाजकाे मितिसम्म कुनै पनि दलित जात जातिभित्र मागि बिहे गरेको घटना सायदै हाेला । प्रेम विवाहको घटनामा कुटपिट तथा पानी बाराबरकाे स्थिति हुन्छ । भलै सभा समाहराेमा , भेला गाेष्ठी, समिनार , दलगत हिसाबले , विभेदकारी समाजिक मूल्य मान्यताले सबै दलित एक ठाउँमा उभिने गरेको देखिन्छ । सबै दलितको मन्च उही हुन्छ , एजेन्डा उहीँ, खेप्नुपरेको समस्या उहीँ र अावज पनि एक हुन्छ । तर जब दलितभित्रकाे पाखण्ड पनलाई खाेतालिन्छ तब थाहा हुन्छ दलित धरातल ।
दलितभित्र कै विभेदले जातीय कुप्रथामा अागाेमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । समाजबाट विभेद गरिएका भित्र विभेद छ भने अरु बाट के अाश गर्ने सकिन्छ ? अरु अर्थात गैरदलितले रमिता हेर्ने सिवाय के नै गर्छन् । गैरदलितका निम्ति झन् सरल बाटो र सहज जवाफ दिने स्थान बनेकाेछ । प्राय गैरदलितले हिजोआज के भन्छन् भने तिमीहरू भित्र एकता छैन , विभेद छ ,अनि अरु बाट के अाश गर्छाैं । के र कसका लागि अान्दोलन गर्छाैं भन्ने सवाल उब्जाएको छ । एक हिसाबले हाे पनि । हामी दलित हेपियाैं, हामीलाई अन्याय भयाे, गैरदलितबाट छुवाछूत जस्तो जघन्य अपराधबाट पिडित भयौं, जातीयताका अाधारमा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमबाट बहिष्कृत भयौं भनेर रातदिन बाेलेर थाक्दैनाै । अर्कोतिर हामी दलितको पगरीमा बसेकाहरू एकले अर्कोलाई विभेद गर्दछौं । हामी झगडा गर्छाैं , मारपिटमा अग्रसरता देखाउँछाै । ठ्याक्कै यसको विपरीत सडकमा हामीलाई विभेद भयो भन्ने दलितहरु नै हुन् । दलित एकता र सहिसुर्ता कुरा गर्ने हामी नै । छुवाछूत पिडकमाथि न्यायिक उपचार भएन भन्दै नारा घन्काउने अनि अर्कोतिर दलितले दलितलाई विभेद , जातीय छुवाछूत कुप्रथाको पालना गर्छाैं ?।याे भन्दा विरोधाभास अरु के हुनसक्छ ! समग्रमा एकले अर्कोलाई बाधा पुर्‍याउने काम बाहेक अरु केही गर्न सकेका छैनाै । याे परिस्थिति भन्दा लज्जास्पद र बिकराल अरु के हाेला र ।
नेपाली समाजमा गैरदलितजति शिक्षित , अाधुनिकतातिर बढेपनि छुवाछूतका घटना घट्ने क्रम जारी छ । बाहिर नाटकिए रुपमा छुवाछूत मुक्त समाजकाे भाषण दिने उनीहरु नै हुन् । तर यथार्थता अर्कै छ । उनीहरू भित्र अहंकारकी भावना , हामी ठुला हाै भन्ने मानसिकता अझै जिवित छ । त्यस्तो मानसिकतालाई मलजल गर्न दलितभित्र हुने विभेदले झन् उर्जा प्रदान गरेको छ । छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराध जुन समुदायले वर्षैदेखि सहेर अाएकाे छ त्यस समुदायभित्र रहेको विभेदकाे खाडलले दलित समुदायलाई झन् कमजोर र विभाजित गर्ने काम गरेको छ । भलै "हामी "दलित भन्छन् दलित प्रतिनिधि र अधिकारकर्मी तर व्यबहारमा म अर्थात मेराेे जातमा टुंगिन्छ । यस्तो माहोले समस्या थप्ने र बल्झाउने काम मात्र गर्छ ।
दलित समुदायको सबैभन्दा ठुलो गल्ती र अज्ञानता भनेकाे अान्तरीक विभेद र जातिय विवाद हाे । दलितहरु एक अापसमा मित्रता भन्दा फाटो धेरै छ । यस्तो फाटाेपनले जुटाउने कामभन्दा फुट्याउने काम मात्र गर्छ । अङ्ग्रेजीमा White man burden भन्ने शब्दावली छ , जसको अर्थ सेताे छाला भएका सबै राम्रा , सभ्य , संस्कारी र अन्य छाला अर्थात कालाे छाला हुनेहरु असभ्य , कुसंस्कारी, अज्ञानी र नराम्रा मानिन्छ । सेताे , गाेराे छाला हुने हरु राम्रोपनकाे मानककाे रुपमा हेरियो । त्यस्तै नेपाली समाजमा नाक चुच्चो एवम् तागाधारीहरु मात्र राम्रा , सभ्य र संस्कारीका रुपमा हेरिन्छ भने नराम्रा , अज्ञानी तथा अन्य नराम्रा प्रतिक रुपमा दलितलाई देखाईयाे । ठ्याक्कै त्यस्तै प्रवृति दलितभित्र काे कामी समुदाय देखिने गरेको छ । दलितबिच हुने यस्ता घटनाले दलित अान्दोलनलाई कमजोर बनाउनुका साथै अन्य गैरदलिताई भन्न सरल बाटो बनाइदिएको छ । धेरै गैरदलितकाे एउटै तर्क हुन्छ , तिमीहरू बिच नै विभेद छ, हामीबाट त स्वत हुन्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ । त्यस्ता अपराधी तर्कलाई दिने जवाफ भनेको दलित समुदायबीच सुधार र एकता को अावस्यकता छ ।
जातिय छुवाछूत तथा भेदभावका घटनामा जाे जति जाेडिन्छन् ती सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ । चाहे त्यो दलित दलितबिचकाे अान्तरिक भेदभाव हाेस् या अन्य समुदायबाट । छुवाछूत तथा जातीय भेदभावका दाेषीलाई यस्तो सजाय ताेक्नु पर्छ ताकि अरु कसैले पनि छुवाछूतका घटना घटाउने चेष्टा गर्न नसकाेस् । विभेदका घटनालाई ढाकछोप गर्ने , मेलमिलाप गराउन खाेज्नेलाई पनि कार्वाहीकाे दाएरमा ल्याउन पर्छ ।
दलित समुदायभित्र जतिपनि ठुला मानिएका जातहरु छन् तिनमा चेतना तथा चेतावनी ल्याउन अावस्यक छ । दलितबिच हुने विभेदकारी मुल्य मान्यता जरैदेखि उखेल्नु पर्दछ । दलितबिच हुने जातीय विभेद विरुद्ध दलित युवा , अधिकारकर्मीहरु एक जुट भएर लाग्नुपर्छ। जतिसक्दो दलितभित्र काे कुसंस्कारलाई सदाका लागि अन्त्य गरि "हामी" भन्ने भावनालाई टेवा पर्याउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । दलित जात जातिबिच भाइचारा एंवम एकतालाई अटुट बनाउनुपर्छ । दलितले दलितलाई गर्ने व्यबहार र परम्परागत शैली पुर्णरुपले परिवर्तन हुन जरुरी छ । जबसम्म दलितहरु सांस्कृतिक तथा अात्मीय रुपमा एक हुदैनन् तबसम्म अरु गैरदलितबाट समानताको अाश के गर्न सकिन्छ । दलित, दलितबिच राेटी र बेटीकाे सम्बन्ध हुनुपर्दछ । दलित एकताको नारा मार्फत जतिपनि कुरिति, कुसंस्कार , चालचलन, समाजिक मुल्य मान्यतालाई मेटाएर समग्र दलित उत्थान तथा उन्नतिमा लाग्नुपर्छ । अन्तयमा, दलित युवाहरु बौद्धिक लडाइँका लागि तयार हुनुपर्छ । दलितका मामला पनि अझै अरु दलितले लेखिएका लेख पढ्ने दिनको अन्तय गर्नुपर्छ । विभिन्न जातजातिक दलितहरू एकभई साझा वकालत गर्नुपर्छ अनिमात्र विभेदकारी समाजका अाँखा खुल्छन् ।
By Hamro Sanchar at 8:29 AM